वीएफएमका कार्यकारी निर्देशक डा. सन्देशदास श्रेष्ठ सहित विभिन्न व्यक्तिहरु सम्मानित - २५ कार्तिक २०७५, NepalTimes
वीएफएमका कार्यकारी निर्देशक डा. सन्देशदास श्रेष्ठ सहित विभिन्न व्यक्तिहरु सम्मानित
विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरुलाई नेपाल भाषा तथा सांस्कृतिक संघ (झी पुचः) विराटनगरले सम्मान गरेको छ ।
झी पुचःले नेपाल सम्वत् ११३९ को अवसर पारेर बिहीबार विराटनगरमा आयोजना गरेको समारोहमा शिक्षा र सञ्चार क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका वीएफएमका कार्यकारी निर्देशक डा. सन्देशदास श्रेष्ठल, विगत १८ वर्षदेखि नेपाली पत्रकारिता र साहित्यमा सक्रिय मिनकुमार श्रेष्ठ ‘नवोदित’सहित विभिन्न व्यक्तिहरुलाई सम्मान गरेको हो ।
त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका भविसकुमार श्रेष्ठ, मिस नेवा ११३८ की विजेता सुधा श्रेष्ठ,नेपाल भाषामा स्नातकोत्तर गर्ने सिर्जना श्रेष्ठ, नेवार समुदायका अग्रज हरिदेवी ताम्राकार र पूर्वडीआईजी बद्री प्रधानलाई सम्मान गरिएको झी पुचःका हरिबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
एसईईमा उत्कृष्ट अंक ल्याउने नर्वदा श्रेष्ठ र प्रशन्न राजभण्डारीलाई नगदसहित पुरस्कृत गरिएको थियो भने समारोहमा नेपाल सम्वतको क्यालेण्डर र झी पुचःको मुखपत्रको पनि विचोचन गरिएको थियो । नेपाल सम्वतको अवसर पारेर झी पुचःले हरेक वर्ष समाजका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्दै आएको छ ।